Yan Aung: မော်ဒန်ဒိုင်ယာရီ…
ဒီနေ့စာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ ညနေခင်းက ခဏလေးနားလိုက်တယ်။ ထမင်းတစ်ပန်းကန်ကို ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ၅ နာရီလောက်ကစပြီး စာမူတွေကို Blog ပေါ်မှာတင်ပေး၊ edit နည်းနည်းပါးပါးလုပ်နဲ့ အချိန်တော်တော်ကုန်သွားလိုက်တယ်။ စာမူတစ်ချို့ကို volunteer တွေက ပို့တော့ပို့ထားပါရဲ့၊ ဒါပေမယ့် ဘလော့ခ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရမရဆိုတာ မပြောထားဘူး။ အဲဒါနဲ့ post တစ်ချို့ကို Draft အနေနဲ့ပဲ သိမ်းထားလိုက်ရသေးတယ်။ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ကိစ္စကတော့ တော်တော်လေးကို နီးစပ်လာပါပြီ…
ပြီးတော့ NHL Game ဆော့တယ်။ Hockey ရိုက်ရတာ တော်တော်အရသာရှိတာပဲ။ အပူပိုင်းဒေသက လာတဲ့မြန်မာပြည်သား ပီသပါပေတယ်လို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးမိလိုက်သေးတယ်. ၂ ပွဲနိုင်ပြီး ၁ ပွဲရှုံးတယ်။ Toronto ကို ရှုံးသွားတာ။ ဒီကောင်တွေက Hockey မှာ ဆရာကြီးတွေပဲ။ Medium အဆင့်နဲ့မို့ နည်းနည်း အသက်ရှုချောင်သေးတယ်။ Hard အဆင့်သာဆိုရင်တော့ ရေရေလည်လည် ကွဲမှာပဲဗျ။
၃ ပွဲလောက်ဆော့ပြီးတော့ ဖိုရမ်ထဲဝင်ကြည့်တယ်။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား message မတွေ့ရဘူး။ ကိုစိုးဇေယျကြီးကတော့ ခရီးထွက်သွားတယ်လို့ ညက Email ပို့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Blog တွေကို ၀င်ဖတ်ကြည့်၊ Hi Hi လုပ်လိုက်သေးတယ်။ ကိုဝေယံလင်းနဲ့ ကိုကျော်ဇေယျတို့က mmblogbook2 ကို eot လုပ်ထားပေးတာတွေ့ရတယ်။ ဂွတ်ထ. ဂွတ်ထ..
သူငယ်ချင်းက ဘောလုံးကန်ဖို့လာအဖော်ညှိတာနဲ့ လိုက်သွားလိုက်သေးတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အားကစားရုံထဲမှာ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့တွေ ပြိုင်ပွဲလုပ်နေတာနဲ့ သွားကြုံရတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ Fraternity နဲ့ တစ်ခြား Fraternity ဘောလုံးကန်ရမှာလေ. Schedule ဆွဲတာ ညံ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Soccer Coach ကြီးကိုသာ စိတ်ထဲကပဲ အားရပါးရ ကွိစိကွစလုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဗျာ..
ပြန်လာတော့ မိုးနည်းနည်းကျလာတာနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေး ပြေးလာခဲ့ရတယ်။ အိမ်ခန်းထဲရောက်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ အိုးမိုင်ဂေါ့…
ဂျိန်းတက်တက်ဂျိန်းဆိုသလို မိုးကြိုးတွေလင်းလက်၊ ကောင်းကင် အဇဋ္ဋာ တစ်ခုလုံးမည်းမည်းမှောင်ပြီး ထစ်ချုန်းမိုးတွေ ရွာချလာပါတော့တယ်ဗျာ…
ဘယ်နှာ့ကြီးပါလိမ့်၊ ဆောင်းကုန်ပြီး နွေကူးခါနီးလေးမှာ မိုးတွေဘာတွေ ရွာချလို့ပါလား…
ဟိုတလောက မြန်မာပြည်မှာ နေကြတ်သွားတယ်လေ။ အမိမြန်မာပြည်ကြီး စနေဂြိုဟ်က လွတ်ပြီဆိုပြီး နာမည်ကျော် ဝေဒပညာရှင်ကြီးက ဟောကိန်းထုတ်သွားတာကို သတိရလိုက်မိတယ်။
အင်း… ဒီမိုးရွာတာကတော့ ရွှေပြည်တော်ကြီး အေးချမ်းတော့မယ့် နိမိတ်ပဲ. လောလောဆယ် အရမ်းကို သည်းလာတာကတော့ ငါ့အတွက် တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ဖုိ့ ခွင်ပဲလို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သုံးသပ်ပြီးသကာလ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ဂမုန်းပွင့်က ၀ယ်ခဲ့တဲ့ ဂွမ်းစောင်အနီရောင်ကြီးထဲကို တိုးဝင်ပြီး ကမ္ဘာလောကကြီးကို ခေတ္တ ဘိုင့်ဘိုင့်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဩော်. သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ Blog က သူမ တင်ထားပါတဲ့ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကိုတော့ Download လုပ်ပြီး Windows Media Player နဲ့ Repeat လုပ်ထားလိုက်သေးတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်က ရွှေမင်းသားပေါ့ဗျာ…
ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး သတိပြုမိတာကတော့ ကျွန်တော့် မျက်လုံး ၂ လုံးလုံး ပွင့်နေတယ်ဗျာ.. အိပ်ယာပေါ်ကထလိုက်တော့ စောင်ကလည်း အောက်ကိုကွာကျသွားတယ်။ အင်း. ဒါဆိုရင်တော့ ခါတိုင်းလိုပါပဲလေလို့ အားပြန်ရှိသွားတယ်။ ဒီကိုရောက်ခါစက အိပ်ယာနိုးရင် ကိုယ်ဘယ်ကို ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းကို မသိဘူး။ ခါတိုင်းလိုပဲ အခန်းအပြင်ကို ထွက်လိုက်တာနဲ့ “ကာလနဂါးလေး နိုးလာပြီလား..” လို့ ပြုံးတုံးတုံးနဲ့ မေးလာမယ့် အမေ့မျက်နှာကို သွားမြင်မိတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းလေးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ…ဘယ်သူမှ မရှိကြပါလားဗျာ…
အင်း. မဖြစ်သေးပါဘူးလေ.. စိတ်ကို ဂီယာနည်းနည်း ပြန်တင်ဦးမှပဲ. မျက်နှာသစ်၊ ရေတစ်ခွက်ကို အားရပါးရသောက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ ကျောင်း email ကို ၀င်စစ်ကြည့်တယ်။ Math Professor က reminder message ပို့ထားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မမေ့အောင် စာရွက်ပေါ်ချရေးထားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် မနက်ဖြန် Indianapolis ကို Math Conference တက်ဖို့သွားရမယ်ဗျ. သိပ်တော့လည်း အထင်ကြီးမနေနဲ့ဦး။ ဟိုလျှောက်သွား၊ ဒီလျှောက်သွား၊ ဟိုလျှောက်ပြော၊ ဒီလျှောက်ပြောပြီးရင် Lunch ကို Free အုပ်မှာဗျ. အစကတော့ အဲဒီ့မှာ ညအိပ်မလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် စနေနေ့ နေ့လည်ခင်း ကျောင်းမှာ နေ့လည်စာစားပွဲတစ်ခုကို တက်ရဦးမှာဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ ညအိပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းလေးကို ရင်နာနာနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်ရတော့တယ်ဗျာ..မနှစ်ကလည်း ကျွန်တော်တစ်ခါသွားဖူးတယ်ဗျ. ညဘက်အိပ်တဲ့ ဟိုတယ်မှာ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဖွဲ့ စကားပြောရတာ တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေးတွေရော အားလုံးခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ Asian ကောင်မလေးတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လို့ Asian Type လေးတွေကို မြင်တာနဲ့ မျက်လုံးလေးက ခပ်မြန်မြန်လေး scan ဖတ်သွားတာမျိုးရှိသေး။ မခို့တရို့လေးနဲ့ ရှိုးသွားတဲ့ အကြည့်လေးတွေက နယူတန်ရဲ့ ဥပဒေသ ၃ ချက်ကိုတောင် မေ့သွားစေနိုင်တယ်. ပြောရင်းနဲ့ကို ရင်တွေခုန်လာပြီဗျာ… အဝေရာလေးတစ်လုံးလောက် ငုံလိုက်ဦးမှပဲ..
ဓာတ်ပုံတွေ ရရင်ရိုက်ခဲ့မယ်. တင်တော့ မတင်ပေးသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ပုဗ္ဗေစအခြေမလှသူမို့ပါဗျာ..တစ်ပုံလောက်တော့ တင်ပေးကြည့်မယ်. တော်ကြာ ဘကြီးအောင်ညာတယ်လို့ ပြောနေကြမှာစိုးလို့(ညက မင်းအောင် သီချင်းနားထောင်တာ နည်းနည်းများသွားတယ်…ဟဲဟဲ) ဘကြီးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော့်ရဲ့ last name ကို ယူထားသေးတယ်ဗျာ. မမိုက်ပါဘူး…
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ခုလိုမျိုး Daily Activities ကို ပေါက်တတ်ကရ ရေးလိုက်ရတာ အရသာရှိသဗျ…
ကဲ..ကဲ. အားလုံးကို Good night ဗျာ…